Akukho Nto ‘Inokusahlula Eluthandweni LukaThixo’—Sixabisekile KuThixo | Sondela
1. Yiyiphi imvakalelo edimazayo abanayo abantu abaninzi, kuquka namanye amaKristu okwenyaniso?
NGABA uYehova uThixo uyakuthanda wena ngokobuqu? Bambi bayavuma ukuba uThixo uyaluthanda uluntu ngokubanzi, njengoko uYohane 3:16 esitsho. Kodwa enyanisweni bavakalelwa kukuba: ‘UThixo akanakundithanda mna ubuqu.’ KwanamaKristu okwenyaniso asenokuba nawo amathandabuzo anjalo ngamathuba athile. Idimazekile, enye indoda yathi: “Ndikufumanisa kunzima ukukholelwa ukuba uThixo undikhathalele.” Ngaba nawe ukhe ube namathandabuzo anjalo maxa wambi?
2, 3. Ngubani ofuna sikholelwe ukuba asinto yanto okanye asithandeki emehlweni kaYehova, yaye sinokuyitshitshisa njani ingcamango enjalo?
2 USathana ulangazelela ukusenza sikholelwe ukuba uYehova uThixo akasithandi yaye akasixabisi. Liyinyaniso elokuba, uSathana udla ngokubalukuhla abantu ngokubafaka impakamo nokuzidla. (2 Korinte 11:3) Kodwa uyakuvuyela ukubenza bazive bengento yanto abo babonakala bezizisulu. (Yohane 7:47-49; 8:13, 44) Ulisebenzisa kakhulu elo qhinga kule “mihla yokugqibela” yamanqam. Abantu abaninzi namhlanje bakhulele kwiintsapho ezingenawo “umsa wemvelo.” Abanye bajikelezwe ngabantu abandlongondlongo, abazingcayo nabaneentloko ezilukhuni. (2 Timoti 3:1-5) Abantu abaye bangamaxhoba empatho-mbi, ubuhlanga, okanye intiyo kangangeminyaka emininzi, basenokuvakalelwa kukuba abanto yanto okanye abathandeki.
3 Ukuba nawe uvakalelwa ngaloo ndlela, musa ukuphelelwa lithemba. Abaninzi bethu bakhe bazigxeke ngokungeyomfuneko ngamathub’ athile. Kodwa khumbula ukuba, iLizwi likaThixo lenzelwe ukuba ‘lilungelelanise izinto’ nokuba ‘libhukuqe izinto ezinqatyisiweyo.’ (2 Timoti 3:16; 2 Korinte 10:4) IBhayibhile ithi: “Siya kuziqinisekisa iintliziyo zethu phambi kwakhe ngokubhekisele kuko nakuphi na oko iintliziyo zethu ezisenokusigwebela isohlwayo kuko, ngenxa yokuba uThixo mkhulu kuneentliziyo zethu yaye uyazazi zonke izinto.” (1 Yohane 3:19, 20) Makhe sihlolisise iindlela ezine iZibhalo ezisinceda ngazo ukuba ‘siqinisekise iintliziyo zethu’ ngothando lukaYehova.
4, 5. Umzekelo kaYesu woongqatyana ubonisa njani ukuba sixabisekile emehlweni kaYehova?
4 Okokuqala nje, iBhayibhile ifundisa ngokungqalileyo ukuba uThixo uxabisa ngamnye wabakhonzi bakhe. Ngokomzekelo, uYesu wathi: “Ngaba oongqatyana ababini abathengiswa ngengqekembe exabiso lincinane na? Kanti akukho namnye kubo oya kuwela emhlabeni ngaphandle kolwazi lukaYihlo. Nina ke, kwaneenwele ezi zentloko yenu zibaliwe zonke. Ngoko ke musani ukoyika: Nixabiseke ngaphezu koongqatyana abaninzi.” (Mateyu 10:29-31) Khawucinge nje ngoko kwakuthethwa ngaloo mazwi kwabo babephulaphule uYesu ngenkulungwane yokuqala.
“Nixabiseke ngaphezu koongqatyana abaninzi”
5 Sisenokuzibuza isizathu sokuba umntu athenge ungqatyana. Kaloku, ngomhla kaYesu ungqatyana wayeyeyona ntaka ityiwayo yayithengiswa ngexabiso eliphantsi. Phawula ukuba ngengqekembe nje enye yexabiso elincinane, wawunokuthenga oongqatyana ababini. Kodwa kamva uYesu wathi ukuba umntu wayethenga ngeengqekembe ezimbini, wayefumana, kungekhona oongqatyana abane, kodwa abahlanu. Le ntaka elibhaso wawuyiphiwa nje ngokungathi ayinaxabiso kwaphela. Kubonakala ukuba aba ngqatyana babengenaxabiso emehlweni abantu, kodwa yena uMdali wayebagqala njani? UYesu wathi: “Akukho namnye kubo [kuquka nalo olibhaso] olibalekayo phambi koThixo.” (Luka 12:6, 7) Imele ukuba noko ngoku iya isikhanyela eyona ngongoma kaYesu. Ukuba uYehova umxabise ngaloo ndlela ungqatyana omnye, makube ke uxabiseke kangakanani yena umntu! Njengoko uYesu etshilo, uYehova wazi zonke iinkcukacha ngathi. Kwaneenwele ezi zentloko yethu zibaliwe!
6. Kutheni sinokuqiniseka ukuba uYesu wayengazibaxi izinto xa wayethetha ngokubalwa kweenwele zentloko yethu?
6 Ngaba neenwele zethu zibaliwe? Bambi basenokucinga ukuba noko uYesu wayezibaxa izinto apha. Kodwa ke, khawucinge nje ngethemba lovuko. Hayi indlela amele ukuba usazi ngokucokiseke ngayo uYehova ukuze akwazi ukuphinda asidale! Usixabise kakhulu kangangokuba ukhumbula zonke iinkcukacha, kuquka imizila yethu yemfuza kwanayo yonke inkumbulo namava esiye sawazuza ebudeni bayo yonke iminyaka. * Ngoko ukubala iinwele zethu—ngokuqhelekileyo eziba li-100 000 kwintloko nganye—kuyinto elula oko.
Yintoni UYehova Ayibonayo Kuthi?
7, 8. (a) Ziziphi iimpawu uYehova akuvuyelayo ukuzibona njengoko ehlola iintliziyo zabantu? (b) Yiyiphi eminye yemisebenzi esiyenzayo ayixabisayo uYehova?
7 Okwesibini, iBhayibhile isifundisa oko uYehova akuxabisayo kubakhonzi bakhe. Ngokuphandle nje, uyakholiswa ziimpawu zethu ezintle nangumzamo esiwenzayo. UKumkani uDavide wathi kunyana wakhe uSolomon: “UYehova uyazigocagoca zonke iintliziyo, akuqonde konke ukutyekela kweengcamango.” (1 Kronike 28:9) Njengoko uThixo ehlola iintliziyo zamawaka ezigidi zabantu kweli hlabathi lizaliswe lugonyamelo nentiyo, hayi indlela amele ukuba uvuya ngayo xa ebona intliziyo ethanda uxolo, inyaniso nobulungisa! Yintoni eyenzekayo xa uThixo ebona intliziyo emthandayo, efuna ukufunda okungakumbi ngaye nokwabelana nabanye ngolo lwazi? UYehova usixelela ukuba uyabaphawula abo baxelela abanye ngaye. Ude ‘wanencwadi yokukhumbuza yabo bonke abo bamoyikayo uYehova nabo bacinga ngegama lakhe.’ (Malaki 3:16) Iimpawu ezinjalo zixabisekile kuye.
8 Yiyiphi eminye yemisebenzi emihle ayixabisayo uYehova? Ngokuqinisekileyo yimigudu yethu yokuxelisa uNyana wakhe, uYesu Kristu. (1 Petros 2:21) Omnye umsebenzi obalulekileyo awuxabisayo uThixo ngowokusasaza iindaba ezilungileyo zoBukumkani bakhe. KwabaseRoma 10:15, sifunda oku: “Hayi indlela ezibukeka ngayo iinyawo zabo bavakalisa iindaba ezilungileyo zezinto ezilungileyo!” Ngokuqhelekileyo asidli ngakucinga ngeenyawo zethu ‘njengezibukekayo,’ okanye ezintle. Kodwa apha zifanekisela imigudu yabakhonzi bakaYehova yokushumayela iindaba ezilungileyo. Yonke imigudu enjalo mihle yaye ixabisekile emehlweni akhe.—Mateyu 24:14; 28:19, 20.
9, 10. (a) Kutheni sinokuqiniseka ukuba uYehova uyakuxabisa ukunyamezela kwethu imiqobo eyahlukahlukeneyo? (b) Yiyiphi imbono egwenxa uYehova angenayo ngabakhonzi bakhe abathembekileyo?
9 Kwakhona uYehova uyakuxabisa ukunyamezela kwethu. (Mateyu 24:13) Khumbula ukuba, uSathana ufuna ukuba umnikele umva uYehova. Suku ngalunye ohlala ngalo unyanisekile kuYehova umenza akwazi ukuluphendula ungcikivo lukaSathana. (IMizekeliso 27:11) Maxa wambi ukunyamezela akukho lula. Mihla le sijamelana nezilingo ezinjengempilo enkenenkene, iingxaki zemali, ukudandatheka, neminye imiqobo. Kwanokulinda ithuba elide kusenokudimaza. (IMizekeliso 13:12) Ukunyamezela phezu kwalo nje ucelomngeni olunjalo kuxabiseke nangakumbi kuYehova. Kungako nje uKumkani uDavide wacela uYehova ukuba agcine iinyembezi zakhe “kwintsuba” yakhe, waza ngentembelo wongezelela wathi: “Ngaba azikho encwadini yakho?” (INdumiso 56:8) Ewe, uYehova uyazixabisa yaye uyazikhumbula zonke iinyembezi nokubandezeleka esikunyamezelayo ngoxa sihlala sinyanisekile kuye. Nako oko kuxabisekile emehlweni akhe.
UYehova uyakuxabisa ukunyamezela kwethu xa sijamelene nezilingo
10 Noko ke, intliziyo enenkohliso isenokubuphikisa ubungqina obunjalo bokuba sixabisekile emehlweni kaThixo. Isenokusiqiqisa ngelithi: ‘Kodwa baninzi abanye abaqhuba kakuhle kunam. Hayi indlela amele ukuba uziva edane ngayo uYehova xa endithelekisa nabo!’ UYehova akasithelekisi nabanye; yaye akakho ngqongqo engekho nangqwabalala. (Galati 6:4) Uzigocagoca ngolwazelelelo iintliziyo zethu, yaye uyakuxabisa nakuphi na ukulunga akubonayo kuzo—nokuba kuncinane kangakanani na.
UYehova Wahlukanisa Okulungileyo Kokubi
11. Yintoni esinokuyifunda ngoYehova kwindlela awayisingatha ngayo imeko ka-Abhiya?
11 Okwesithathu, njengoko uYehova esigocagoca, ngenyameko uyahlukanisa, ekhangela oko kulungileyo sikwenzayo. Ngokomzekelo, xa uYehova wagqiba kwelokuba wonke umnombo owexukileyo kaKumkani uYerobhoham ubulawe, wayalela ukuba omnye woonyana baloo kumkani, uAbhiya, angcwatywe ngokundilisekileyo. Ngoba? “Kuba kuye kufunyenwe okuthile okulungileyo kuYehova uThixo kaSirayeli.” (1 Kumkani 14:1, 10-13) Enyanisweni, uYehova wayigocagoca intliziyo yaloo mfana waza wafumana “okuthile okulungileyo” kuyo. Nokuba kwakukuncinane okanye kungabalulekanga kangakanani oko kulungileyo, uYehova wakubona kufanelekile ukukuphawula eLizwini lakhe. Wada wakuvuza ngokuthi alenzele inceba ngomlinganiselo ofanelekileyo elo lungu linye lendlu yabawexuki.
12, 13. (a) Imeko kaKumkani uYehoshafati ibonisa njani ukuba uYehova ukhangela okulungileyo kuthi kwanaxa sisona? (b) Ngokuphathelele imisebenzi neempawu zethu ezintle, uYehova unguMzali onothando ngayiphi indlela?
12 Omnye umzekelo omhle nangakumbi ngophathelele uKumkani olungileyo uYehoshafati. Xa lo kumkani wenza isenzo sobudenge, umprofeti kaYehova wathi kuye: “Ngenxa yesi senzo umcaphukisile uYehova.” Hayi indlela amele ukuba amothusa ngayo loo mazwi! Kodwa isigidimi sikaYehova asizange siphelele apho. Saqhubeka sisithi: “Noko ke, kukho izinto ezilungileyo ezifunyenweyo kuwe.” (2 Kronike 19:1-3) Ngoko ingqumbo kaYehova yobulungisa ayizange imenze angakuboni ukulunga kuYehoshafati. Hayi indlela okwahluke ngayo oko kubantu abangafezekanga! Xa sicatshukisiwe ngabanye abantu, sisenokungakuboni ukulunga kwabo. Naxa sisona, ukuphoxeka, ukudana nokuziva sinetyala kusenokusenza singakuboni ukulunga kwethu. Noko ke, khumbula ukuba, ukuba siyaguquka ezonweni zethu size sizabalazele ukuba singaphindi sizenze, uYehova uyasixolela.
13 Njengoko uYehova ekugocagoca, uyazityeshela izono ezinjalo, kanye ngendlela umhloli wegolide awatyeshela ngayo amatye angenaxabiso. Kuthekani ngeempawu nemisebenzi yakho emihle? Kwekhu, “bubuncwane” abugcinayo ke obo! Ngaba wakha wayiphawula indlela abazali abanothando abayixabisa ngayo imizobo yabantwana babo okanye imisebenzi yabo yesikolo, maxa wambi emva kweminyaka nabantwana sebayilibala kudala? UYehova ungoyena Mzali unothando. Logama nje sihlala sithembekile kuye, akaze ayilibale imisebenzi neempawu zethu ezintle. Enyanisweni, ukugqala njengentswela-bulungisa ukuzilibala, yaye akanayo intswela-bulungisa. (Hebhere 6:10) Kwakhona usigocagoca nangenye indlela.
14, 15. (a) Kutheni ukungafezeki kwethu kungaze kumenze uYehova angakuboni ukulunga okukuthi? Zekelisa. (b) Yintoni aza kuyenza uYehova ngokulunga akubonayo kuthi, yaye ubagqala njani abantu bakhe abathembekileyo?
14 UYehova ukhangela ngaphaya kokungafezeki kwethu aze abone oko sinamandla okukufeza. Oku singakuzekelisa ngolu hlobo: Abantu abakuthandayo ukuzoba benza umzamo omkhulu wokulungisa imizobo eyonakeleyo. Ngokomzekelo, xa kwiNdlu Yemizobo yaseLondon, eNgilani, umntu othile wadubula ngompu waza wonakalisa umzobo kaLeonardo da Vinci owawuxabisa malunga nama-30 ezigidi zeedola, akukho namnye owacebisa ukuba ekubeni ngoku lo mzobo wonakalisiwe, ufanele ulahlwe. Ngoko nangoko kwaqaliswa ukulungisa loo mzobo omalunga nama-500 eminyaka ubudala. Ngoba? Ngenxa yokuba wawuxabisekile emehlweni abo bathanda imizobo. Ngaba ke wena akuxabisekanga ngakumbi na kunomzobo owenziwe ngetshokwe nangomsizi? Ngokuqinisekileyo uxabisekile emehlweni kaThixo—nokuba wonakaliswe kangakanani na kukungafezeki okuzuze ilifa. (INdumiso 72:12-14) UYehova uThixo, uMdali oligcisa wabantu, uza kubabuyisela emfezekweni bonke abo bayamkelayo inyameko yakhe yothando.—IZenzo 3:21; Roma 8:20-22.
15 Ewe, uYehova uyakubona ukulunga kuthi nakuba thina sisenokungakuboni. Yaye njengoko simkhonza, uya kukuhlakulela kukhule oko kulunga side sifezeke ekugqibeleni. Kungakhathaliseki ukuba ihlabathi likaSathana lisiphethe njani na, uYehova ubaxabisile abakhonzi bakhe abathembekileyo njengabanqwenelekayo, okanye abaxabisekileyo.—Hagayi 2:7.
UYehova Uyalubonakalisa Uthando Lwakhe
16. Bubuphi obona bungqina bukhulu bokusithanda kukaYehova, yaye sinokwazi njani ukuba esi sipho senzelwe thina ngokobuqu?
16 Okwesine, uYehova ulubonakalisa ngamandla uthando lwakhe ngathi. Ngokuqinisekileyo, idini lentlawulelo likaKristu liyeyona mpendulo inamandla kubuxoki bukaSathana bokuba asinto yanto okanye asithandeki. Masingaze silibale ukuba ukufa kabuhlungu kukaYesu kwisibonda sentuthumbo nentlungu enkulu ngakumbi eyanyamezelwa nguYehova njengoko wayebukele uNyana wakhe othandekayo esifa, oko kububungqina bokusithanda kwabo. Noko ke, ilusizi into yokuba abantu abaninzi bekufumanisa kunzima ukukholelwa ukuba esi sipho senzelwe bona ngokobuqu. Bavakalelwa kukuba abasifanelanga. Kodwa ke, khumbula ukuba umpostile uPawulos wayebatshutshisa abalandeli bakaKristu. Ukanti, wabhala wathi: ‘UNyana kaThixo wandithanda waza wazinikela ngenxa yam.’—Galati 1:13; 2:20.
17. UYehova usitsalela njani kuye nakuNyana wakhe?
17 UYehova ukungqina ukusithanda kwakhe ngokuthi ancede ngamnye wethu ukuba angenelwe kwidini likaKristu. UYesu wathi: “Akukho mntu unako ukuza kum ngaphandle kokuba uBawo, owandithumayo, amtsale.” (Yohane 6:44) Ewe, nguYehova ngokwakhe ositsalela kuNyana wakhe nakwithemba lobomi obungunaphakade. Ukwenza njani oko? Ngomsebenzi wokushumayela, ofikelela kuye ngamnye wethu, nangomoya wakhe oyingcwele, awusebenzisayo uYehova ukusinceda ukuba siziqonde yaye sizisebenzise iinyaniso zokomoya phezu kwazo nje iintsilelo nokungafezeki kwethu. Ngoko uYehova unokuthetha ngathi amazwi afanayo nalawo wawathethayo ngoSirayeli esithi: “Ndikuthandile ukusa kwixesha elingenammiselo. Kungenxa yoko le nto ndikutsalile ngobubele bothando.”—Yeremiya 31:3.
18, 19. (a) Yiyiphi indlela uYehova akubonisa ngokunzulu ngayo ukusithanda kwakhe, yaye yintoni ebonisa ukuba ulinyamekela ngokwakhe eli lungiselelo? (b) ILizwi likaThixo lisiqinisekisa njani ukuba uYehova ungumphulaphuli onovelwano?
18 Mhlawumbi lilungelo lomthandazo elenza ukuba uthando lukaYehova lusichaphazele ngokunzulu. IBhayibhile imema ngamnye wethu ukuba ‘athandaze ngokungapheziyo’ kuThixo. (1 Tesalonika 5:17) Uyaphulaphula. Ude abizwe ngokuba ‘nguMphulaphuli wemithandazo.’ (INdumiso 65:2) Eli lungelo akalinikanga nabani na ongomnye, kwanoNyana wakhe uqobo. Khawufan’ ucinge: UMdali wendalo iphela usibongoza ukuba sithandaze kuye, ngokukhululekileyo. Yaye uluhlobo olunjani lomphulaphuli? Ngaba ungumphulaphuli ongenabubele, ongenazimvakalelo, nongakhathaliyo? Akunjalo konke konke.
19 UYehova unovelwano. Luyintoni uvelwano? Omnye umKristu okhulileyo othembekileyo wathi: “Uvelwano yintlungu yakho entliziyweni yam.” Ngaba ngokwenene uYehova uyavakalelwa yintlungu yethu? Sifunda oku ngokuphathelele ukubandezeleka kwabantu bakhe amaSirayeli: “Ebudeni bokubandezeleka kwabo konke wabandezeleka.” (Isaya 63:9) UYehova akazange aphelele nje ngokukubona ukubandezeleka kwabo; waba novelwano ngabantu bakhe. Indlela awavakalelwa ngokunzulu ngayo izekeliswe ngamazwi kaYehova uqobo kubakhonzi bakhe, esithi: “Ochukumisa nina uchukumisa ukhozo lweliso lam.” * (Zekariya 2:8) Hayi indlela okumele ukuba kubuhlungu ngayo oko! Ewe, uYehova unovelwano ngathi. Xa sisentlungwini, naye uba buhlungu.
20. Yiyiphi ingcamango engalungelelananga esimele siyiphephe ukuze sithobele isiluleko esifumaneka kwabaseRoma 12:3?
20 Akakho umKristu ovuthiweyo onokubusebenzisa ubungqina obunjalo bokusithanda nokusixabisa kukaThixo njengesizathu sokuba nekratshi okanye impakamo. Umpostile uPawulos wabhala wathi: “Ngobubele obungasifanelanga endabunikwayo ndixelela wonk’ ubani apho phakathi kwenu ukuba angazicingeli ngaphezu koko amelwe kukuzicingela ngako; kodwa makacinge khon’ ukuze abe nengqondo ephilileyo, ngamnye njengoko uThixo amabele umlinganiselo wokholo.” (Roma 12:3) Enye inguqulelo ithi apha: “Ndithi kuye ngamnye wenu makangazigqali ngaphezu koko akuko ngokwenene, kodwa makazigqale ngomlinganiselo ofanelekileyo.” (A Translation in the Language of the People, by Charles B. Williams) Ngoko ngoxa sinandipha ngokupheleleyo uthando lukaBawo wethu osemazulwini, masibe nengqondo ephilileyo size sikhumbule ukuba asilufanelanga uthando lukaThixo.—Luka 17:10.
21. Bubuphi ubuxoki bukaSathana esimele siqhubeke sibugatya, yaye yiyiphi inyaniso yobuthixo esimele siqhubeke siyibethelela ezintliziyweni zethu?
21 Ngamnye wethu makenze konke okusemandleni akhe ukugatya bonke ubuxoki bukaSathana, kuquka ubuxoki bokuba asinto yanto okanye asithandeki. Ukuba amava akho ebomini akwenza uzigqale njengomntu owonakele kakhulu ukuba ungafanelwa luthando olunzulu lukaThixo, okanye uyigqale imisebenzi yakho elungileyo imincinane kakhulu kangangokuba amehlo akhe agocagocayo angabi nakuyiphawula, okanye izono zakho uzigqale zizikhulu kangangokuba nokufa koNyana wakhe oxabisekileyo kungabi nakuzigubungela, ngoko uye wafundiswa ubuxoki. Bugatye ubuxoki obunjalo ngentliziyo yakho yonke! Masiqhubeke siyibethelela ezintliziyweni zethu inyaniso echazwe emazwini aphefumlelweyo kaPawulos, athi: “Ndeyisekile kukuba nakufa nabomi nazingelosi narhulumente nazinto zilapha ngoku nazinto zizayo namandla nakuphakama nabunzulu naso nasiphi na esinye isidalwa aziyi kuba nako ukusahlula eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu iNkosi yethu.”—Roma 8:38, 39.
^ isiqe. 6 Ngokuphindaphindiweyo iBhayibhile inxulumanisa ithemba lovuko kunye nenkumbulo kaYehova. Indoda ethembekileyo uYobhi yathi kuYehova: ‘Owu akwaba ubungandibekela umda wexesha uze undikhumbule!’ (Yobhi 14:13) UYesu wathetha ngovuko lwabo “bonke abo bakumangcwaba enkumbulo.” Oko kwakufanelekile kuba uYehova ubakhumbula ngokupheleleyo abo bafileyo anenjongo yokubavusa.—Yohane 5:28, 29.
^ isiqe. 19 Ezinye iinguqulelo kule ndinyana zibonisa ukuba lowo uchukumisa abantu bakaThixo uzichukumisa iliso lakhe okanye uchukumisa iliso likaSirayeli, kungekhona iliso likaThixo. Le mpazamo yabangelwa ngababhali abathile ababeyigqala le ndinyana njengengabonisi ntlonelo ngoThixo baza ke ngoko bayitshintsha. Esi senzo sabo siphosakeleyo sabusitha ubunzulu bovelwano lobuqu lukaYehova.
INdumiso 139:1-24 Amazwi aphefumlelweyo kaKumkani uDavide abonisa njani ukuba uYehova unomdla onzulu kuye ngamnye wethu?
Isaya 43:3, 4, 10-13 Uvakalelwa njani uYehova ngabo bakhonza njengamaNgqina akhe, yaye uzibonakalisa njani ngokoqobo iimvakalelo zakhe?
Roma 5:6-8 Kutheni sinokuqiniseka ukuba isono sethu asiluthinteli uthando lukaYehova ukuba lungafikeleli kuthi luze lusincede?
Yude 17-25 Sinokuzigcina njani siseluthandweni lukaThixo, yaye yintoni esiphembelela ngokunxamnye noko?